Hopitaly Saint Benoit Menni Imerintsiatosika :: Efa misy eto amintsika ny fitsaboana aretin-tsaina amin’ny zavakanto • AoRaha
Pejy manokana • Sosialy
Hopitaly Saint Benoit Menni Imerintsiatosika Efa misy eto amintsika ny fitsaboana aretin-tsaina amin’ny zavakanto
Miavaka ny tobim-pahasalamana mandray an-tanana an’ireo olona manana aretin-tsaina, Saint Benoit Menni any Imerintsiatosika. Mampiasa ny fomba fitsaboana amin’ny alalan’ny zavakanto izy ireo. Teknika iray mifantoka amin’ny fampiasana ny fahaiza-manao isan-karazany izy io. Fotoana fohy dia efa sitrana ny marary noho io teknika vaovao eto amintsika io.
Toerana amoron-dalana, lalana vita rarivato no miditra ao amin’ ity tobim-pahasalamana naorin-dry frera ao Imerintsiatosika ity . Toerana milamina ao anatin’ny foto-drafitrasa maoderina sy malalaka tokoa. Tamin’ny taona 2016 izy no naorina ka marary eo ho eo amin’ny dimanjato sy arivo no notsaboina tao ka nahazo fahasitranana avokoa ny ankamaroany. Telopolo eo ho eo ihany kosa ny marary zakan’ireo efitrano misy ao an-toerana, saingy haingana kokoa ny fotoana hijanonan’ny marary ao.“ Misy karazany roa ny fitsaboana ato aminay.Misy ny fampidirana hopitaly izany hoe matory ato mihitsy ireo marary. Mandray an’ireo marary mandalo amin’ny antoandro fotsiny ihany koa anefa izahay. Afaka miala tato izy ireo rehefa tapitra ny fitsaboana fa ny fanafody kosa tohizana hatrany”, hoy Raoelina Loyola talen’ny hopitaly.
Mandray an-tanana ny karazan’aretin-tsaina rehetra ity tobim-pahasalamana ity. Ny “schizophrénie” no ankamaroan’ny aretina tena mpahazo an’ireo marary tsaboina ao ankehitriny ho an’ireo miditra hopitaly. Manaraka an’izany ny aretina vokatry ny fifohana zava-mahadomelina , ny androbe manana tranga ara-tsaina “ Raisina an-tanana ato ihany koa ny olona voan’ny fikorontanan-tsaina sy ny fihetseham-po”, hoy ny dokotera Ramparany Ando Christian, dokotera sady mpamdrindra ny toerana. Afaka manatona any an-toerana ihany koa ireo olona manana olana be amin’ny asa na ireo niharan’ny fahadisoam-panantenana be loatra ireny. Mandray an-tanana an’ireo manana olana ara-tsaina ny tobim-pahasalamana n’aiza n’aiza fiaviany toy ny avy aty Antananarivo hatrany ivelan’i Madagasikara.
Miavaka tokoa nefa feno sy mahomby ny fitsaboana any amin’ny hopitaly Saint Benoit de Menni. Tsy fatorana na sanatria hidiana any anaty efitrano ireo marary fa afaka miriaria malalaka. Manana fandaharam-potoana efa voalahatra izy ireo hitazonana an’ireo marary mba hanan-katao foana ialana amin’ny fandefasany eritreritra lavitra. Misy ohatra ny fanaovana dia an-tongotra. Asaina mandihy sy manao fanatanjahan-tena malefaka efa mifanaraka amin’ny fitsaboana ny aretin-tsaina ihany koa izy ireo.
Etsy andanin’izany, manampy amin’ny famolavolana ny rafitra mahaolona rehetra toy ny saina, ny vatana ary fanahy ny hopitaly. Zava-kanto maro isan-karazany no andraisan’ireo marary anjara amin’izany toy ny hoso-doko amin’ny lafiny rehetra.Teboka iray amin’ny fitsaboana izay mbola tsy misy mpanao firy eto Madagasikara io ao amin’ny Saint Benoit de Menni io. “ Tsy ho lasa mpanakanto na mpanao hosodoko malaza akory no tanjona fa fanampiana amin’ny maha olona. Ny hoso-doko , ohatra dia manampy an’ireo marary hamoaka ny hatezerana be ao anatiny izay tsy hainy ny naneho azy hatramin’izay ”, hoy Issouf Armitte Sarah, mpampianatra zavakanto.
Fitaovana isan-karazany no ampiasain’izy ireo rehefa manao hosodoko. Manao andiany isan-tarika sy mandeha tsirairay ireo marary mandritra ny fandokoana. Nambaran’ireo mpiandraikitra ny zavakanto fa misy dikany avokoa ny loko ampiasan’ny marary sy ny sary ataony. Misy sary hoso-doko maro isan-karazany miranty ao amin’ny hopitaly ankehitriny izay vokatry ny asan’ireo marary nifandimby tao hatramin’izay. Nosafidiana arakaraka ny lohahevitra izy ireo raha ny nambaran’ireo mpanentana any an-toerana.
“ Tsy voafetra ny lohahevitra safidiana toy ny olombelona, fifankatiavana, finamanana , vorona sy ny marohafa. Asaina manao sary eo ireo marary ka ny fiarahana no tanjona. Ataony sary eo avokoa ny fanehoany sy ny fahazoany ny lohahevitra”; hoy Rakotonirina Orlando, mpanentana.
Ireo tanora no tena betsaka no raisina an-tanana ao amin’ity hopitaly any Imerintsiatosika ity. Telo hatramin’ny valopolo mahery ny salan-taonan’izy ireo. Tanora lehilahy iraika amby roapolo hatramin’ny telo amby roapolo taona ny ankamaroany . Olana vokatry ny zava-mahadomelina nofohana sy alikaola ny 45%-n’ny aretina mahazo azy ireo araka ny fanampim-panazavan’ny mpitsabo.
Nambaran’ireo tompon’andraikitra ao amin’ity tobim-pahasalamana ity fa efa misy amin’ireo tanora eto amintsika no mifoka sy mitsindrona zava-mahadomelina avo lenta ka tsy zakan’ny vatan’izy ireo.
“ Lasa mihavoasarika sy miankin-doha tanteraka amin’ny zava-mahadomelina ny tanora any an-tsekoly sy eny amin’ny fiarahamonina satria hita betsaka amin’ny horonan-tsary amin’ny fahitalavitra izany. Hahitana betsaka an’ireny zava-mahadomelina ireny koa any amin’ny fihaonana hiarahan’ny samy tanora”, hoy ny frera Ramahefasona Jean Marie anisan’ny mpanorina ny hopitaly.
Fitsinjovana ny marary
Azo lazaina ho manaraka ny toetrandro ny foto-drafitrasa sy ny fitaovana ampiasaina ao amin’ny hopitaly any Imerintsiatosika izay manana sampana eny Marohoho Tsimbazaza ity. Misy ny efitrano natokana hatorian’ireo marary,ny fisakafoanana ary ny fanaovana hosodoko sy ireo fampianarana isan-karazany, amin’ny sarany mora. Mitsinjo manokana an’ireo fianakaviana sahirana rehetra izay tonga ao no tarigetran’izy ireo.
“ Vinavinaina ny hanangana ivon-toerana ara-tsosialy mba hahafahana manome asa sy fampianarana ny marary aorian’ny fitsaboana. Tsy azo lavina fa maro ireo miverina marary indray aorian’ny fitsaboana satria tsy araky ny fianakaviana ny fanaraha-maso tokony homena azy ireo. Efa anisan’ny tanjon’ny hopitaly rahateo ny hoe mamerina ny olona indray any anaty fiarahamonina aorian’ny fitsaboana ka hanome asa sy fianarana ho azy ireo indray ny fisian’ io toerana fampianarana io” , hoy ny fanampim-panazavan’ny frera Ramahefason Jean Marie.
Fepetra amin’ny fanadinana Ampitomboina 4 022 ireo efitrano amin’ny Cepe sy Bepc
Tambin-drisiky ny mpiasa Miandrandra ny vahaolan’ny Filoha ny CMC Andohatapenaka
Fiterahana sy covid-19 Vehivavy bevohoka 48 notsaboina tetsy Befelatanana
Salama tompoko, afaka mahazo contact ve azafady?
Fanatsarana fotodrafitrasa :: Hisy tolo-bidy vaovao hanamboarana ny lalana eny Besarety